Zibheke imiphumela izinkunzi | News24
Zibheke imiphumela izinkunzi
Johannesburg - UDidier Drogba, Samuel Eto'o, Asamoah Gyan, John Obi Mikel kanye noJonathan Pitroipa bangezinye zezihlabani ezizobe zilwela ukuthola indawo emidlalweni yeNdebe yoMhlaba ka-2014.
Amazwe alezi zinkunzi azohlangana kowokuhlungela ngempelasonto, kubhala abeKickOff.
I-Ivory Coast izobe ilindele ukuthi amagoli iwashayelwe uDrogba, umgadli ophinda naye abengukaputeni wezwe lakhe, u-Eto'o, useshintshe umqondo, njengoba esezoba yingxenye yeqembu leCameroon elizodlala neTunisia eRades.
Iningi lamagoli eGhana avalelwa phakathi uGyan kanti uzobe naye ebhekwe ngabomvu.
Ngemuva kokushaya igoli lakhe lokuqala emidlalweni engu-185 yeEnglish Premier League, umdlali weNigeria uMikel unesifiso sokubhakuzisa inethi uma sebebhekene ne-Ethiopia e-Addis Ababa.
Njengoba wavotelwa njengomdlali awayevelele kwi-2013 Africa Cup of Nations, uPitroipa ulindele ukusiza iqembu lakhe iBurkina Faso linqobe uma selibhekene neAlgeria neOuagadougou.